शनिबार थपिए २ हजार २२५ नयाँ संक्रमित, २८४६ जना संक्रमणमुक्त (तथ्यांकसहित) - Sankalpa Khabar
4. कैदी फरार घटनामा दुई प्रहरी निलम्बित
6. घरसँगै जल्याे छाेराछाेरी पढाउन जाेहाे गरेकाे ऋण
शनिबार थपिए २ हजार २२५ नयाँ संक्रमित, २८४६ जना संक्रमणमुक्त (तथ्यांकसहित)
८ कार्तिक १६:३३
काठमाडौं । पछिल्लो २४ घन्टामा २ हजार २ सय २५ जना नयाँ संक्रमित फेला परेका छन् । १३ हजार ८ सय ४६ जनामा पीसीआर टेस्ट गर्दा उक्त संख्यामा नयाँ संक्रमित फेला परेका हुन् । संक्रमितमध्ये ७ सय ७९ जना महिला र १ हजार ४ सय ४६ जना पुरुष रहेका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
शनिबार संक्रमितमध्ये सबैभन्दा धेरै १ हजार २ सय १७ जना बागमति प्रदेशको रहेका छन् । प्रदेश–१ मा २ सय २२, प्रदेश–२ मा ८४, गण्डकी प्रदेशमा १ सय ४५, लुम्बिनी प्रदेशमा ३ सय ७५ जना, कर्णाली प्रदेशमा ४२ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ सय ४२ जना नयाँ संक्रमित फेला परेका हुन् ।
शनिबार संक्रमित भन्दा निको हुनेको संख्या बढी रहेको छ । २ हजार ८४६ जना संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । हालसम्म निकोहुनेको कुल संख्या १ लाख ८ हजार ३३४ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा १३ जनाको मृत्यु भएको छ । यसँसँगै हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या ८४२ पुगेको छ ।
उपत्यकामा १११० नयाँ संक्रमित
काठमाडौं उपत्यकामा शनिबार १ हजार १ सय १० जना नयाँ संक्रमित फेला परेका छन् । त्यसमध्ये ४ सय २९ जना महिला र ६ सय ८१ पुरुष रहेका छन् ।
कोभिडरिुद्धको भ्याक्सिन फिजर प्रयोग गर्न बेलायतले दियो अनुमति
१७ मंसिर १३:४०
स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर विद्यालय खोल्ने स्थानीय तहकाे तयारी
१६ मंसिर १६:०६
नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर घटेकै हो, के भन्छन् चिकित्सक…
१४ मंसिर १२:५७
प्रचण्ड गुटगत हिसाबले मात्र चलेको शंकर पोखरेलको आरोप
१६ मंसिर १२:३७
त्रिवि सेवा आयोगको परीक्षा पुन: विवादमा
१७ मंसिर १३:५७
ओलीले ‘फायर’ खोले, प्रचण्ड समूह के गर्ला ?
१५ मंसिर ०९:०८
सधैभरि सरकार परिवर्तनको दौडधुप किन ? (यस्तो छ– ओली…
१३ मंसिर १६:०५
प्रचण्ड पक्ष बैठक राख्ने तयारीमा, ओलीले आफू निकट नेतासँग…
१७ मंसिर ११:११
नेपाल आइपुगे चिनियाँ रक्षामन्त्री, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री भेटेर आजै फर्किने
१४ मंसिर १०:५५
१५ मंसिर ०६:५९
ओली समूहलाई प्रचण्ड नेपाल समूहका युवा–विद्यार्थीको काउन्टर, थापाथलीमा भेला
१९ मंसिर १४:२८